को थियो भियतनाम स्वतन्त्र बनाउने पर्दा पछाडिको हिरोे? - Nepal Talk
माघ ३ गते, २०७७ मा प्रकाशित
‘‘नक्कलमा सफल हुनुभन्दा मौलिकतामा सफल हनु राम्रो हुन्छ हर्मन मेलभिलले भनेको यो हरफले एकजना भियतनामी नागरिक हो चि मिन्हलाई सम्झायो । समयको विभिन्न काल खण्डमा देशले राम्रा मान्छेहरु पाउँछ । भियतनामले पनि पायो । भियतनाम स्वतन्त्र हुनुमा हो चि मिन्हको ठुलो त्याग थियो ।
उन्नाइस सय पैतालिसको अगस्त क्रान्तिमा भियतनामी युद्धको ईतिहासमा हो चि मिन्ह गतिलो माइलस्टोन बनेका थिए । उतिखेर भियतनाममा औपनिवेशिक शासनको अन्त्य र राजतन्त्रको त्यागको सुरुवात मात्र नभई भियतनामी स्वतन्त्रता र कम्युनिष्ट उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको पहिलो र महत्त्वपूर्ण चरण पनि दर्साएको थियो । त्यो नेता जसले देश बनाउनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो । उनले खाली खुटटा हिडथे । कसैले तँपाइले किन जुत्ता नलाउनुभएको भनेर सोधे भने उनी भन्थे,, ‘मेरा जनता भोकै छन मैले जुत्ता लगाको सुंहाउदैन । उनी सबैको प्यारा नेता थिए । त्यतिखेर उनका शुभचिन्तकहरुले हो ची मिन्हलाई “काका हो“ भनेर बोलाउने गर्थे ।
हो ची मिन्हको रणनीतिक योजनाको परिणाम थियो । उन्नाइस सय पैँतालिसको अगस्ट क्रान्तीको पछाडिको सफलतामा उनैको हात थियो । थोरै मात्र अधिकार प्रयोग गरेर उनले औपनिवेशिक शासकहरूलाई दबाब दिने काम गरेका थिए । हो चि मिन्ह अमेरिकी सेनाहरूसँग लडेका थिए । भियतनामको सफलता मुख्यतया उनैको उत्कृष्ट योजना र रणनीतिको कारण थियो ।
नेपालीमा एउटा आहान छ नि ‘‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुसा्रे पात भनेझै, उनी सानै उमेरदेखि ज्ञानी थिए । उनको त्यो स्वाभावले आफ्ना मानिसहरूलाई औपनिवेशिक शासकहरूबाट स्वतन्त्र पार्न मद्दत ग¥यो । उनी पहिलो विश्वयुद्धको शुरूमै भियतनामको स्वतन्त्रताको लागि आवाज बने । उनी बोल्सेभिक क्रान्तिबाट प्रेरित थिए । बोल्सेविक क्रान्तिको सफलता पछि फ्रान्स र बेलायतको उपनिवेशहरूमा विद्रोहहरू भएको थियो । बिरोधिहरुको कमजोरि पता लगाउन उनीहरुलाई अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने मनसायले शाशकहरुको चालाबाजिको अध्ययन गरिरहन्थे । हो ची मिन्हले भियतनामको मुक्तिका लागि आफ्नो योजनाहरू बनाउने उद्देश्यले उनीहरूको अध्ययन गरिरहन्थे । उनले फ्रान्समा भियतनामीहरूको एक समूहको आयोजना गरे र भर्साइल्स शान्ति सम्मेलनको लागि निवेदन दिएका थिए ।
हो चि मिन्ह आफनै देश भियतनाम फर्के ठ्याक्कै त्यो देश छोडेको केहि बर्ष पछि उनले अमेरिका, अफ्रिका, बेलायत, फ्रान्स, रसिया र चीनलगायत धेरै देशहरूको भ्रमण गरेका थिए । उनले पछि इण्डोचिनेस कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । भियतनाममा फर्केपछि उनले भियतनामको स्वतन्त्रताका लागि लिग स्थापना गरेका थिए ।, उनको पार्टिमार्फत मिन्हले भियतनामको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा र अगस्त क्रान्तिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
हो ची मिन्ह एक सिद्धान्तवादी मात्र थिएनन् । एक रणनीतिक योजनाकार पनि थिए । उनको विद्रोहको अवधारणाको फराकिलो आधार थियो ।सैन्य बाहेक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्ष पनि थिए । महत्त्वपूर्ण कुरा त उनले क्रान्तिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनताको सहभागिता र एक सशक्त किसान, मजदुरहरुका कुराहरु सुन्न थाले । हो ची मिन्हको मुक्ति क्रान्तिको सिद्धान्तमा उनको विचारहरु आफ्नो कृति ( “मुक्ति को मार्ग“ मा निहित छन् । उनले विद्रोहको समयमा सशस्त्र बलको संरचना र प्रकृति बाहिर निकाले । हिट एन्ड रन रणनीतिको उनको अवधारणाले भियतनामलाई विरोधीहरूलाई ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।
विजयको लागि उनको जोड “सशस्त्र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको आक्रामकतासँग नजिकबाट समन्वय गरिएको सम्पूर्ण जनताको विद्रोह“ थियो । उनले भियतनामको ठोस परिस्थितिमा क्रान्तिकारी युद्धसम्बन्धी मार्क्सवाद(लेनिनवाद रचनात्मक रूपमा प्रयोग गरे । बहुसंख्यक जनसंख्याको समर्थनको आवश्यकता महसुस गर्दै उनले मानव र नागरिक अधिकार र सम्पत्तिको संरक्षण, निजी सम्पत्तीको सम्मान, अन्तस्करणको स्वतन्त्रता र जातीय समूह र बीच समानताको आश्वासन बाडथे । । होले आफ्नो सम्पत्तीको सुरक्षाको आश्वासन दिएर थुप्रै साम्राज्यवाद विरोधीलाई जितिछाडे । हो युनाइटेड नेश्नल फ्रन्टमा कामदारहरू, किसानहरू, शहरहरूको क्षुद्र पूंजीपति वर्ग, यहाँसम्म कि राष्ट्रिय बुर्जुवा वर्ग र जमिन्दार वर्गका देशभक्त व्यक्तित्वहरू समावेश थिए। क्रान्ति र स्वतन्त्रताको लागि मानिसहरूलाई एकजुट गर्ने उनको क्षमता अद्धभुत थियो ।
चतुर रणनीतिकारको रूपमा हो ची मिन्ह स्वतन्त्रताको उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्रोह गर्ने अवसरको निम्ति पर्खिरहेका थिए । उनलाई थाहा थियो कि जापानी र फ्रेन्च अन्ततः एक अर्कासँग लड्न र निकास दिन्छन् । जापानीहरूले इन्डोकिनालाई ओगटे र ठूलो संख्यामा फ्रान्सेली अधिकारीहरूलाई कैद गरे वा मारिए र छ महिना पछि अमेरिकाले जापानमा बम खसाल्यो जसले जापानलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । जापानको आत्मसमर्पण पछि सम्राट बाओ दाई क्रान्तिको पक्षमा त्यागिए । २ सेप्टेम्बर १९४५ मा हो ची मिन्हले भियतनामलाई स्वतन्त्र घोषणा गरे ।
यसपछि फ्रान्सेलीसँग वार्ता जारी रह्यो तर कुनै सफलता प्राप्त भएन । पहिलो इण्डोचिना युद्ध सुरु भयो । फ्रान्सेलीहरू पराजित भए र स्वतन्त्र उत्तरी भियतनाम अस्तित्वमा आएको थियो । भियतनामले र अमेरिकी सेनासँगको लडाई जारी नै राख्योे ।
हो ची मिन्हले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । कुशलतापूर्वक आफ्ना शक्तिशाली कम्युनिष्ट मित्रहरू मस्को यात्राको क्रममा उनीहरूबीच मध्यस्थको रूपमा व्यवहार गर्दै सन्तुलन कायम राखेका थिए । दुई पक्षको एकीकरण उनको मृत्यु भएको थियो ।
भियतनाममा फ्रान्सेलीहरू सामिल हुनु भन्दा १००० बर्ष सम्म त्यस क्षेत्रका मानिसहरूले अक्सर चिनियाँ सेनाको विजयका लागि युद्ध गरिसकेका थिए ।
को थिए हो चि मिन्ह?
हो ची मिन्ह फ्रान्सेली सरकारमा भियतनामी नागरिक कर्मचारीका छोरा थिए जसले भियतनामी स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्थे । उनले आफ्ना बच्चाहरूलाई हुर्काएर कटर राष्ट्रवादी बन्न लगाएका थिए । हो ची मिन्ह निर्वासनमा लगिए र अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूमा उनले विभिन्न पहिचान धारण गरे जहाँ उनले लन्डनको कार्लटन होटेलमा सहायक पेस्ट्री कूक र होटेल पोर्टरबाट काम गरेर ’जेनिन’ चिनियाँ चित्रकारको रूपमा काम गरेका थिए । फ्रान्सको पेरिसमा पुरातन वस्तुहरु र पश्चिमीहरुको बारेमा प्रशंसाका शब्दहरु देखाएर चासोेको साथ अध्ययन गरेका थिए । उनले अध्ययन गरेका ज्ञान स्वतन्त्रता संग्रामको प्रयोगशाला आफनै शाशकहरुलाई बनाए । छ वर्षसम्म पेरिसमा बसेको बेला उनले भियतनामको आत्मनिर्णयको लागि वुड्रो विल्सनको लागि निवेदन पेश गरे उनको निबेदन केहि समय बेवास्ता गरियो । अन्तयमा फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य भइछाडे । उनी मस्को गएका थिए । जहाँ उनले स्टालिनलगायत विभिन्न कम्युनिष्ट नेताहरूसँग भेट गरे । उनका लेखहरू भियतनाममा तस्करी भइरहेको बेलामा उनले कम्युनिष्ट विधिहरू र माओत्सेतुयलनको छापामार युक्तिहरू उनको जिवनको सफलताको खुराक बन्यो । चीन र सोभियत संघको वरिपरि यात्रा गरिरहन्थे । उनी भियतनाम फर्किएपछि उनले जापानको अत्याचारसंग लड्न थाले । उनले दक्षिणी चीनमा अमेरिकी परिचालकहरूसँग सम्पर्क गरे र जापानीहरूको बिरूद्ध सैनिकहरूलाई प्रशिक्षण दिन उनीहरूको समर्थन प्राप्त गरे । हो ची मिन्हको आन्दोलन मुख्य रूपले राष्ट्रवादी थियो, फ्रान्सेसी र जापानी विरोधी एन्टिभिजनको रूपमा परिभाषित गर्दै जापानीहरुलाई भियतनाम छोड्न बाध्य गराएका थिए । उनै होले आफ्ना सयौं देशवासीहरुलाई भेटे । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भियतनामको स्वतन्त्रताको घोषणा गरे जसमा उनले अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा पत्र र फ्रान्सेली क्रान्तिको घोषणाबाट उद्धृत गरे । युद्धको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी सरकारले कम्युनिष्टसँगको उनको सम्बन्धमा बढी चासो राख्यो र सन्सोवियत संघ र (हाल कम्युनिष्ट) चीनले डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक भियतनामलाई दिएको मान्यतालाई उनले जोड दिएका थिए ।
-द न्यज क्यासटल आर जि एस हिस्टरी ब्लग